Nigeria Oo Waajahaysa Xaalad Halis Ah Oo Firqooyinka Diintu Sababeen Iyo Dhibaatadii Boko Xaram Oo Salleelo Noqonaysa - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaNigeria Oo Waajahaysa Xaalad Halis Ah Oo Firqooyinka Diintu Sababeen Iyo Dhibaatadii Boko Xaram Oo Salleelo Noqonaysa
Nigeria Oo Waajahaysa Xaalad Halis Ah Oo Firqooyinka Diintu Sababeen Iyo Dhibaatadii Boko Xaram Oo Salleelo Noqonaysa
Dowladda Nigeria ayaa mamnuucday urur diimeed taabacsan Iran kaasoo ay ku eedeysay qalalaaso iyo inuu “cadow ku yahay qaranka.”
Ururka oo lagu magacaabo dhaq-dhaqaaqa Islaamka ee Nigeria (IMN) ayaa dhaliilay go’aanka dowladda, waxaana uu ku doodayaa inuu yahay mid nabadeed oo ka dhashay dhibaato ay geysteen laamaha ammaanka ee dalkaasi.
Arintan ayaa dhalisay walaac ah in Nigeria ay kamid noqoto wadamada ay ku hardamayaan firqooyinka Islaamka ee Sunniga iyo Shiicada.
Muxuu yahay ururka IMN?
Ururkan oo la sameeyay afartan sano ka hor ayaa u ololeeya in Nigeria laga hirgeliyo dowlad Islaami ah oo u qaab eg tan Iran.
Waxaa dhiirageliyay kacdoonkii Iran ee uu 1979-kii xukunka kula wareegay Ayatullah Khumeyni. Wadaadkaasi ayaa ah hogaamiyahooda ruuxiga ah ee ay baycada la galaan xubnaha IMN, waxaana ku xiga hogaamiyahooda maxalliga ah Sheekh Ibrahim Zakzaky.
Ururka IMN ayaa isu arka dowlad uu hogaamiyaheeda sharciga yahay Sheekh Zakzaky oo dowladda Nigeria u xiran tan iyo 2015.
IMN ma aqoonsana dowladda Nigeria, waxaana hogaankeedu u haystaa inuu yahay mid fasahaad badan oo Alle ka furtay.
Waxa uu xarumo agaasiman ku leeyahay inta badan 36 gobol ee ay Nigeria ka kooban tahay, taasoo siinaysa haykal dowladeed.
Ururka ayaa sidoo kale qaar kamid ah gobollada waqooyi ku leh iskuullo iyo cisbitaallo u gaar ah.
Xubnaha IMN ayaa intooda badan ah dad wax bartay oo jagooyin muhiim ah ka haya milateriga, booliska iyo hay’adda sirdoonka Nigeria.
Tiro ahaan waxaa lagu qiyaasaa inay dhan yihiin 5% ilaa 17% Muslimiinta Nigeria oo la rumaysan yahay inay gaarayaan boqol milyan oo qof.
Maxay dowladdu u mamnuucday IMN?
Xafiiska madaxweyne Muxamadu Buhari ayaa ku sheegay sababta loo mamnuucay IMN inay tahay in ururkaasi “ay la wareegeen dad xagjir ah oo aan rumaysneyn dibedbaxyada nabada ah, balse qalalaaso kiciya” si ay ujeedkooda u gaaraan.
Arintan ayaa daba socota bannaan baxyo ay sameeyeen xubnaha ururka oo dalbanaya in la sii daayo Sheekh Zakzaky oo xiran tan iyo 2015 iyo in cadaalad ay helaan boqolaalka taageerayaashi ah ee ku baxay gacanta laamaha ammaanka.
Dibedbaxyada ayaa u badnaa kuwo rabshada wata oo dhexmaray taageerayaasha IMN iyo laamaha ammaanka, oo ay ku jiraan kuwo ka dhacay bannaanka dhismaha baarlamaanka.
Muxuu ururka IMN ka yiri mamnuucidda?
Ururka IMN ayaa beeniyay inuu ka dambeeyo qalalaasaha dhacay, waxaana uu laamaha ammaanka ku eedeeyay dilka dibedbaxayaal aan rabshad samayn.
Waxa ay u arkaan madaxweyne Buhari oo ah Sunni inuu u adeegayo Sacuudi Carabiya, isla markaana uu baabi’in rabo Shiicada Nigeria.
Ururka IMN ayaa dacwadda uu qabo u gudbiyay maxkamadaha, waxaana uu sheegay inuu hakin doono dibedbaxyada si fursad ay u helaan dhex dhexaadiyayaasha doonaya inay xalliyaan “xiisadda” ka dhalatay xariga Sheekh Zakzaky.
Maxkamada sare ee Nigeria ayaa dhammaadkii 2016 go’aamisay in xariga hogaamiyahaasi uu sharci darro yahay. Waxaa la xiran xaaskiisa oo lagu magacaabo Zeenah.
Lamaanaha ayaa qaba xanuuno kala duwan, waxaana sanadkii hore Sheekh Zakzaky ku dhuftay xanuunka faaliga.
Wararka ayaa sheegaya in loo oggolaaday inay Hindiya u aadaan daryeel caafimaad.
Ma noqon karaa Ururka IMN jabhad hubaysan?
Hawlgal ay ciidamada Nigeria 2009 ku qaadeen xaruntii Boko Xaraam ee magaalada Maiduguri ayaa dhaliyay isku dhacyo ay ku dhinteen dad ka badan 700 oo qof.
Ninkii hogaaminayay Boko Xaraam, Maxamed Yuusuf ayaa waxaa qabtay oo uu gacantooda ku dhintay booliska Nigeria.
Arintaasi ayaa horseeday in Boko Xaraam ay billaabaan kacdoon hubaysan oo ilaa hadda galaaftay noolasha dad ka badan 30,000 ayna ku barakaceen in ka badan laba milyan oo kale.
Qaar kamid ah shacabka Nigeria ayaa ka cabsi qaba in mamnuucidda dowladda ay dhalin karto in ururka IMN uu isu bedelo jabhad Boko Xaraam oo kale ah, uuna geysto khasaaro ka ballaaran kan uu reebay kacdoonka Boko Xaraam.
Ururka IMN ayaa ku baahsan dalka oo dhan, waxaana xubno muhiim ah uu ku leeyahay laamaha ammaanka taasoo khatarteeda leh.
Haseyeeshee dad kale ayaa rumaysan in maadaama xubnaha IMN ay u badan yihiin kuwo aqoon leh aanay ku degdegi doonin dagaal aan faa’iido muuqata keeni doonin.
Iran ma ka hadashay arintan?
Dibedbaxyo lagu dalbanayo in la sii daayo Sheekh Zakzaky ayaa ka dhacay caasimadda Tehran iyo magaalooyin kale, halka madaxweyne Xasan Ruuxaani oo telefoonka kula hadlay dhiggiisa Nigeria kadib rabshadihii dhiigga badan ku daatay ee 2015.
Balse Iran ayaan si shaac baxsan u cambaareyn mamnuucidda IMN, iyadoo ay dhici karto inay fursad siinayso dedaallada loogu jiro siideynta Sheekh Zakzaky iyo xaaskiisa.
Faarax Macallin Oo Hadal Qiiro Leh Ka Jeediyey Dhagaxbuur